Tag: tengesa online | Martech Zone
Tag: tengesa online
Muvhuro, Ndira 14, 2013 China, June 18, 2015 Andrew Davis
Kusarudza kwekutengesa zvinhu zvako online zvinogona kunge zvakangofanana nekutenga yako yekutanga mota. Izvo zvaunosarudza zvinoenderana nezvauri kutsvaga, uye iro rondedzero yesarudzo inogona kukurira. Nharaunda ecommerce saiti inopa mukana wekupinda mune yakanyanya kuwanda network yevatengi asi ivo vanotora yakakura kukura iyo purofiti. Kana iwe uchida kutengesa nekukurumidza uye usina kunetseka nezve margins, vanogona kunge vari vako vakanyanya kubheja.
Mugovera, January 23, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Dzimwe nguva isu tinoita zvinhu nekuda kwekuti ndiyo nzira yakaitwa nayo. Hapana anoyeuka kuti sei chaizvo, asi isu tinoramba tichizviita… kunyangwe zvichitikuvadza. Pandinotarisa zvakajairika zvekutengesa uye zvekushambadzira zvemakambani azvino, chimiro hachina kuchinja kubvira patakatengesa vanhu vachisundira nzira uye vachidaidzira madhora. Mune mazhinji emakambani andakashanyira, "kutengesa" kwakawanda kuri kuitika padivi rekushambadzira remadziro. Kutengesa kunongotora